Etu ị ga - esi amata ma ọ bụrụ na agụọ ozi gị na WhatsApp yana 'Gụọ nnata' nwere nkwarụ | Gam akporosis
Etu esi amata ma ọ bụrụ na mmadụ gụọ ozi gị ọbụlagodi na ha nwere 'Gụọ nnata' nwere nkwarụ
WhatsApp nwere ọtụtụ njirimara na-arụ ọrụ ka mmadụ ghara ịchịkwa anyị dịka ha ga-achọ, mana ha na-egwu egwuregwu megide anyị mgbe anyị chọrọ ịma ma ọ bụrụ na enyi anyị, bụ onye mebiri ọrụ nhọrọ 'Gụọ nnata', ị gụọla ozi ezitere. Ya mere, ọtụtụ mgbe ọrụ nwere ike inwe nnọọ esemokwu site n'amaghị ma ọ bụrụ na ha na ozi na-agụ n'ezie.
Enwere ụzọ iji mara ma ndị kọntaktị ndị ahụ ị na-agụ ozi gị n'ezie. Na ụzọ isi mee ya dị mfe. Ihe na-ato ochi bu na amarala nwa oge, ma ọ nwere ike ime na kọntaktị WhatsApp gị amaghị ya, yabụ ọ bụrụ na ị dị nkọ, ị nwere ike ịma ma ozi gị agụọla, ọbụlagodi na akụrụngwa nwere 'Gụọ nnata'.
Otu esi amata ma mmadu guru ozi gi
Iji hụ ma ndị kọntaktị gị na-agụ ozi WhatsApp gị, naanị ị ga-agụ ya zitere ha ihe ederede. Ọ bụrụ na akpọrọ olu olu ahụ na njedebe, ị ga-ahụ nyocha abụọ na-acha anụnụ anụnụ na-egosi na ha ahụla ozi ahụ, nke pụtara na ọ ga-abụ na ha ahụla ozi ederede gị. Usoro a na-arụ ọrụ na iPhone, Android, Windows Phone, na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ikwesiri ima nke ahu 'Gụọ' Nnata 'atụmatụ enweghị ike nkwarụ maka mkparịta ụka otu, yabụ ọ dịghị mkpa izipu ozi olu na mkparịta ụka otu iji hụ ma onye ọ bụla na-agụ ozi gị, dịka nyocha abụọ na-egosi nke a.
Ma mgbe nke a bụ otu n'ime ihe nzuzo Na WhatsApp, ọ bụ ụzọ dị mfe iji mara ma ọ bụrụ na ndị ọzọ na-agụ ozi ndị ahụ, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ime na ha maara ya, ma soro gị gwuo egwu na nke a. Ọ dịghị ihe na-enweghị ngwụcha na ngwa dị ka WhatsApp.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi amata ma ọ bụrụ na mmadụ gụọ ozi gị ọbụlagodi na ha nwere 'Gụọ nnata' nwere nkwarụ
Quidgets na-enye gị ohere ịmalite wijetị site na ngwanrọ ntọala ngwa ngwa gam akporo
Nwere ike ịnụrụ egwu ugbu a ị na-achụ nta na Pokémon GO